Waxaa magaalada Baydhabo ka socda qaban qaabada shir ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada, kaasoo noqon doona shirkii labaad oo ay isugu yimaadaan – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Waxaa magaalada Baydhabo ka socda qaban qaabada shir ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada, kaasoo noqon doona shirkii labaad oo ay isugu yimaadaan
Allhadaaftimo May 13, 2018 Uncategorized
Waxaa magaalada Baydhabo ka socda qaban qaabada shir ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada, kaasoo noqon doona shirkii labaad oo ay isugu yimaadaan, tan iyo markii sanadkii la soo dhaafay la aas aasay Gole ay ku mideysan yihiin maamul goboleedyada oo lagu dhisay Kismaayo.
Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo muddooyinkii u dambeeyay ka maqnaa Baydhabo ayaa shalay dib ugu laabtay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxda maamul goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland ay ku hormari doonaan Baydhabo maanta illaa berri.
Sidoo kale waxaa calaamad su’aal la gelinayaa ka qeyb galka Madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho, iyadoo labada maamul ay xiriirkooda dowladda Dhexe uu wanaagsan yahay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa xilligan isku khilaafsan arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan arrinta Khaliijka iyo faragelinta Imaaraadka Carabta ee arrimaha Soomaaliya.
Arrinta ugu weyn ee Maamul goboleedyada ka hadli doonaan ayaa ka mid noqon doona xaalada siyaasadeed ee dalka, tallaabooyinka dowladda qaaday mudadii sanadka jirtay iyo arrinta Khilaafka Khaliijka.
Xiriirka u dhaxeeya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaaday, wixii ka dambeeyay markii Ciidamada Nabadsugida ay bishii April ee la soo dhaafay gacanta ku dhigeen lacag mallaayiin dollar ah oo Garoonka Muqdisho ay keentay diyaarad ka diiwaan gishan Imaaraadka Carabta, taasoo loo waday safiirka Imaaraadka Carabta.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta ayaa si kulul u cambaareysay tallaabada ay dowladda ku xayirtay diyaaradda ka diiwaan gishneyd Imaaraadka iyo lacagtii lagu qabtay, gaar ahaan arrin ay sheegeen inay aheyd mid ka baxsan diblomaasiyadda oo lagula dhaqmay diblomaasiyiintooda jooga Muqdisho.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa safaro ku tagay Imaaraadka, si ay u sii wadaan taageerada ay siiyana, kaddib markii Imaaraadka uu joojiyay howshii tababarka iyo taageerida Ciidamada Soomaaliya, iyadoo dowladda Federaalkana ay ka carrootay tallaabadaas.
Previous Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaalida Danjire Micheal Keating ayaa u kala dab qaadaya madaxweynayaasha Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland,
Next Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu maanta u safro dalka Qadar.